Naceybkii Soomaali iyo Itoobiya oo dib u soo laabtay
Sabti, 04 Feberayo 2017 10:57 | Qoraaga: Aden | Muqdisho (afdheer) Dalka Soomaaliya waxaa ka socdaa doorasho 08. Febraayo 2017 waxaa la asteeyey doorashada Madaxweynaha Soomaaliya in ay ka dhacdo Muqdisho.
24 Musharrax ayaa u ordaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya waa tirada ugu badan ee masharrax madaxweyne inta la ogyahay aduunkan aan ku noolahay tan iyo markii la hidisay nidaam dowladeedka ummad dhisato.
Doorashadan waxaa ka dhiman maalmo waxaase welwel ka muujiyey inta badan u tartamayaasha xilka Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in ay Itoobiya faragalin qaawan ku heyso doorashada Soomaaliya.
Waxaa jira shaqsi gaar ah oo ay Itoobiya la dooneyso xilka Madaxweynaha Soomaaliya iyadoo weliba maamul goboleedyada ku khasbeysa inay doortaan shaqsiga ay Itoobiya dooneyso iyadoo ka leh dano gaar ah sidaas waxaa isku raacsan musharixiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya u ordaya 95%.
shacabka Soomaaliya ayaa sidoo kale aaminsan in ay jirto faragalinay dalalka derisku ku hayaan doorashada iyo Siyaasadda Soomaaliya si hoggaanka dalku u noqdo shaqsi aan ka hor iman doonin siyaasadaha dalalkaas ka leeyihiin Soomaaliya.
Hay'ad la sheegay in ay madaxbanaan tahay lagana leeyahay Itoobiya oo warbixin ka soo saartay in aan xilka Madaxweynaha Soomaaliya loo dhiibi karin shaqsi ka soo jeeda beesha Daarood iyadoo ay ku talisay hay'adaas in xilkaas loo dhiibo shaqsi qabiilka Hawiye ah gaar ahaan qabiilka dega Muqdisho iyagoo sabab uga dhigay caasimadda Soomaaliya magaalada muqdisho inay marti ku yihiin qabiilada kale.
Qoraalkaas waxaa dhaliilay siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ku tilmaamay in uu yahay mid lagu kala qrybinaayo dadka Soomaaliyeed iyadoo la ogyahay in magaalada Adis Ababa qabiilka leh ee Oromada aysan heysan ra'iisul wasaaraha Itoobiya.
Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya colaad fog oo la xiriirta gobolka galbeedka Soomaaliya ee ay itoobiya gumeysato loona yaqaano Ogaden regions iyadoo burburkii Soomaaliya 1991kii wixii ka dambeeyey Soomaalidu arkayeen qabqablayaal dagaal oo laga soo huberyo itoobiya si aysan Soomaaliya u xasilin dadkuna ku mashquulaan dhaxdooda ilaa dalku baaba'ay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dgacay awgeed.
Marxalado badan oo ay Soomaaliya soo martay kadib Soomaali meel walba oo ay aduunka ka joogto waxaa ka jira kacdoon diidmo oo ay u hayaan faragalinta Itoobiya ku heyso Soomaaliya iyo in aanay Soomaaliya ku qanacsaneyn in ciidan Itoobiya ay joogaan ciidda Soomaaliya.